डेंगु रोग विरुद्ध युवा पत्रकार सञ्जालको सचेतना र्याली | Jukson
पोखरामा आइतबार डेंगु रोग विरुद्ध सचेतना र्याली सम्पन्न भएको छ । युवा पत्रकार सञ्जाल, गण्डकीले आयोजना गरेको र्यालीमा लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने यो रोगको विषयमा सचेतना गराइएको थियो ।
चिप्लेढुङ्गा मानवअधिकार चोकबाट सुरु भएको र्याली पृथ्वीचोकमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो । र्यालीमा सांसद, नेता,सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, व्यावसायी , कलाकार, पत्रकार, प्रहरी, नागरिक समाज, आमा समूह लगायतको उपस्थिति रह्यो ।
आयोजित कोणसभा कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिका वडा ९ का अध्यक्ष रामराज लामिछानेले युवा पत्रकार सञ्जालको कामले आशाको किरण पलाएको बताए । ‘सञ्जालको यस्तो प्रकारको कामले आशाको किरण पलाएको छ’, उनले भने, ‘वडा कार्यालय सक्दो सहयोग गर्नेछ ।’
डेंगु रोग सरसफाईको अभावका कारण लाग्ने हुँदा सरसफाईमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । पोखराको वडा नं. ८ र ९ मा यो रोग बढि फैलिएको हुँदा वातावरणीय सरसफाईका अभियानका कार्यक्रम सञ्चालन गरि डेंगुरोग बाट बच्न वडाले पनि स्वास्थ जनचेतना सम्बन्धी कार्यलाई तिव्र पारिएको उनको भनाई थियो ।
वडा नं. ८ का अध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले पोखरामा सुरुमा २ जना व्यत्तिहरुमा देखिएको डेंगु रोग अहिले सिंगो पोखराको समस्याको रुपमा रहेको बताए । ‘वडा ८ र ९ लाई बढि प्रभावित पारेको छ’,उनले भने, ‘सवारी साधनका टायरमा पानी जम्मा हुने र लामखुट्टे लाग्ने हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो ।’
बरालले पनि घरघरमा सरसफाई राख्न र खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न नदिन नागरिकलाई अनुरोध गरे । सामाजिक परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि युवा पत्रकार सञ्जालले गरेको काम सह्रानिय भएको भन्दै आफ्नो वडाले पनि सक्दो सहयोग गर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा डेंगु रोगका विषयमा बोल्दै स्वास्थ्य कार्यलय कास्कीका भेक्ट्रल कन्ट्रोल निरिक्षक यम बरालले सुन्दर नगरी पोखरामा रोगहरुले एकपछि अर्को आक्रमक गरिरहेको बताए । अहिले फेरि डेंगु रोग आएको छ । लामखुट्टेको टोकाईबाट लाग्ने यो रोगबाट बच्ने उत्तम उपाय भनेकै सरसफाई नै हो ।
लामखुट्टेको नियन्त्रण गर्न सकियो भने मात्र यो रोगबाट बच्न सक्छौ, उनले भने । उनका अनुसार अहिले कास्कीमा १०९ जना भन्दा बढि यो रोगबाट ग्रसित छन् । दैनिक १० देखि २० जना बिरामीलाई डेंगु रोग लागेको तथ्याङ्क छ ।
यो रोग लाग्दा जाडो हुदैं उच्च ज्वरो आउने, जीउ दुख्ने, जोर्नी तथा हाडहरु बेस्सरी दुख्ने, आँखा चलाउँदा तथा घुमाउँदा दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, खाना खान मन नलाग्ने, गिजा वा शरीरका अन्य अंगहरुबाट रगत बग्न सक्ने, ज्वरो आएको केहि समयपछि प्रशस्त पसिना आएर रक्त चाप घट्न सक्ने आदि लक्षणहरु डेंगु रहेको बरालले बताए ।
यो रोगको कुनै विशिष्ट उपचार नभएको र खोपको विकास समेत नभएको हुँदा समयामा नै अस्पतालमा गई लाक्षणिक उपाचार गर्न उनले सुझाए । आफुखुसी अथवा चिकित्सकको सल्लाह बिना कुनै औषधी प्रयोग नर्गन उनको अनुरोध थियो ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद रामजी प्रसाद बरालले युवा पत्रकार सञ्जाल गण्डकीले गरेको कार्य सह्रानिय रहेको बताए । सञ्जालले गरेको यस्तो कार्यले राज्य, सरकारलाई समेत सहयोग पुगेको अनुभुति आफुले गरेको बताए । छोटो समयमा सञ्जालले गरेको काम प्रति अहिले प्रदेश सरकारको समेत ध्यान पुग्न गएको उनको भनाई थियो ।
युवा पत्रकार सञ्जालका अध्यक्ष भीम थापाले सञ्जालको स्थापना चर्चा कमाउनलाई नगरेको बताए । समाजमा भएका विकृति विसंगती प्रति कलम सँगसँगै आफै पनि फिल्डमा आएर काम गरेर देखाउने अभिप्रायले स्थापना गरिएको उनको भनाई थियो ।
उपाध्यक्ष सुशान्त गाहा मगरले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव सुरेश अधिकारीले गरेका थिए ।
बाबुरामलाई फलोअरको प्रश्न, ‘पत्रिका बोलेको हो कि भारु बोलेको हो डा’साब ? ’
संविधानमाथि प्रधानन्यायाधीशको टिप्पणी : यो कंकालमात्रै हो, अब मासु भर्नुपर्छ 'नयाँ संविधानका धाराले खर्च बढाउँछ'